အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ချဉ်ချဉ် စပ်စပ် ငါးသံပုရာပေါင်း
22 Responses to “ချဉ်ချဉ် စပ်စပ် ငါးသံပုရာပေါင်း”
လိုက်ပွဲ ပေးပါအုံးဗျို့ ထမင်းလည်းလိုက်ပွဲ ပေးပါဗျို့
Very Good Taste .........
My stomach was very Full after I tasted it
အစ်မရေ.. လာဖတ်ရင်းနဲ့ကို သရေယိုနေတယ်..
ဒါနဲ့ ငါးက အကြေးခွံမခွာရဘူးလား...
ခုမှ အကြေးခွံခွာဖို့ သတိရလို့ ပြန်ခွာပေးလိုက်တယ်.. ဟိဟိ
ဒဗလျူလေးနဲ့ မြည်းလိုက်ရလို့ကတော့ လွတ်ကောင်းနေမှာပဲ :-)
ဒါပေမယ့် နံနံပင်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ရှမ်းနံနံ၊ ကြက်သွန်ဖြူစတာတွေကို ကြိုက်ဖူး....။ ကြက်သွန်နီရောပဲ အစိမ်းမစားနိုင်ဘူးဗျာ....။ တစ်ခါတစ်လေ...သူများစားရင် သိပ်အားကျတာ....။ စားကြည့် ဘယ်လို့မှ မရဘူးလေ....။
ဒါပေမယ့် ငါးအသားလေးတွေ နည်းနည်းဖဲ့စားသွားတယ်နော်....ခိခိ....း)
စားချင်လိုက်တာ စာဖတ်ရင်းနဲ့ ကို သရေတွေ ယိုကုန်တယ် အဟီး
မနည်းကိုထိန်းရတယ် သိလားအမ ..
အမ ကတော်တော် အချက်ကျွမ်းတယ်နော် ..သင်ပေးမလား..
ကျေးဇူးပဲ အမ ..................
တစ်ကောင်တည်း ပေါင်းစရာလား ချောရာ စားမဝပါဘူးဆိုနေ။ အဲ ချက်နည်း မှတ်သွားတယ်ဗျို့ ကိုယ်က အဲလိုလေးတွေလုပ်စားရတာ ဝါသနာရှိတယ်။ ကျေးကျေးသယ်ရင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
I seems tasty, Amy.
You are skillful not only at writing but cooking as well.
လုပ်စားမယ်............ဒါပေမဲ့....အဲဒီငါးက ဒီမှာ ဈေးအလွန်ကြီး..။
ဇီဝက (ဆေး-၂) said...
မချောရေ မြန်မြန်လာခဲ့တော့လေ ငါးဆိုသိပ်ကြိုက်တာ ဒါပေမယ့် မချောလာမှ စားမယ် ကိုယ့်အမကို ချစ်လို့ :P
မချောရေ..ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ဆိုကထဲကသားရေကကျနေပြီ။ စားချင်လိုက်တာနော်..။ ခနခနသားရေကျအောင်တော့မလုပ်နဲ့နော်..။ နောက်လည်း
ငါးဆို ဒီက ကြိုက်မှကြိုက်နော်။
ဟဲဟဲ... မိန်းမ မယူခင် အမဆီမှာ အရင် သင်တန်းတက်ခိုင်းရမယ်။ :P
စားချင်လိုက်တာ .. ရှလွတ် :D
ဒုက္ခပါ ဘဲ ဗျာ
ညီမလေးဖို့ အရိုးပဲချန်ထားတာ လုံးဝမကျေနပ်ဘူးမှတ်ပါ...ကိုယ့်ညီမလေးဖို့ အစားအသောက်ဆို ဘယ်တော့မှ သီးသန့်ဖယ်မထားဘူး...အပြင်မှာတွေ့မှ တကယ်လုပ်ကျွေးရမယ်...ဟွန်းးးးးးးးးးးးးးး
[...] ငါးသံပုရာပေါင်း [...]
Print out လုပ်တွားပါတည်ချင်....ကျေးဇူးပါမမ.